Zidane oo ku waalan saxiixa Kylian Mbappé iyo Florentino Pérez oo heysta sababo uu ku diidi karo – Gool FM
Dajiye November 18, 2019
(Madrid) 18 Nof 2019. Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa ku waalan fikrada uu qorsheenayo inuu kula soo saxiixdo xiddiga ay isku wadanka ka soo wada jeedaan iyo naadiga PSG ee Kylian Mbappé xilli ciyaareedka soo socda.
Shabakada “Diario Gol” ayaa soo warisay in Zidane uu ku waalan yahay fikrada uu kula soo saxiixanayo Kylian Mbappé, laakiin madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Pérez ayaan dooneynin inuu raaco wadadan waalida ah ee ku sii jeeda dhanka suuqa kala iibsiga.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Pérez uusan xilligan diyaar u aheyn in la sameeyo saxiixa Mbappé, si uu Zinedine Zidane ugu rumeeyo riyadiisa.
Sababta ugu horeysa uu ku diidan yahay Florentino Pérez xilligan saxiixa Mbappé ayaa waxay tahay in qandaraaskiisa PSG uu gaarayo illaa iyo dhamaadka xagaaga 2022, isla markaana kooxda reer France ay si cad u sheegtay inaysan qorsheeneynin inuu si fudud kaga dhaqaaqo laacibkeedan.
Sida laga soo xigtay Shabakada “Diario Gol” Sababta labaad ayaa waxay tahay in qiimaha ciyaaryahanka uu yahay mid aad u sareeya, waxaana Real Madrid ay ku qasbanaan doontaa inay ku dhawaad miiska u saarto PSG qiimo dhan 400 milyan euro, si loo dhameystiro heshiiska.
Florentino Pérez ayaa wuxuu u arkaa in qiimahan sare ee la duldhigay Kylian Mbappé uu yahay mid xadka ka baxsan, sidaas darteed uu meesha ka saaray fikrkooda ahaa u dhaqaaqista saxiixa weeraryahankii hore ee kooxda Monaco.
Waxaa jirta sabab kale ee ka dhigeysa in Florentino Pérez uu ku dhaganaado fikirkiisa diidmada ah, maadaama uu u arko in imaatinka Kylian Mbappé ee kooxda Real Madrid ay sababi karto isku dhac ka dhasha gudaha qolka labiska ee garoonka Santiago Bernabéu.